Ciidamo ka tirsan milatariga turkiga ayaa soo gaaray magaalada muqdisho – STAR FM SOMALIA
Ciidamo ka tirsan milatariga turkiga ayaa soo gaaray magaalada muqdisho
Diyaarad wayn oo ay leeyihiin Ciidanka Militariga Turkiga, ayaa waxay galabta ka soo cago dhigatay Garoonka Aadan Cadde Ee Magaalada Muqdisho.
Diyaaradan, ayaa waday ciidan ka tirsan Militariga Turkiga oo loogu talla-galay in ay ka qayb qaataan suggida ammaanka Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan oo Jimcaha berrito ku soo wajahan Magaalada Muqdisho.
Militariga Turkiga, ayaa la arkaayay iyagoo ka soo degaya diyaaradan, waxaana loo kaxeeyay goob aan la shaacin, balse u muuqatay in loogu talla-galay in la dejiyo, illaa iyo inta uu ka imanayo Madaxweynaha Turkiga.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, ayaa waxaa la fillayaa in uu xariga ka jaro Safaaradda ugu casrisan ee uu ka dhistay Qaaradda Afrika, isla-markaana ku taala Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Turkiga, ayaa Madaxtooyada Somaliya kula kulmi doona Madaxda Dowladda Dhexe Somaliya, sida Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Booqashadan, ayaa waxay noqonaysaa nooceedii saddexaad oo Madaxweyne Erdoğan uu ku yimaado Xarunta Somaliya. Erdoğan ayaa booqashadii ugu horaysay ku yimid Magaalada Muqdisho bishii August ee sanadkii 2011-ka, xilli abaaro baahsan ay ka jireen Gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Somaliya. Waxaana xilligaa uu caalamka tusay in la imaan karo Somaliya.
25-kii bishii January ee sanadkii hore, ayay ahayd markii uu Madaxweyne Erdoğan xariga ka jaray dhismo cusub, oo Turkigu uu ku soo kordhiyay Garoonka Aadan Cadde.
Turkiga waxaa lagu tilmaamaa isha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha ka hesho Dowladda Somaliya, waxaana xusid mudan in mashaariic uu ka wado Caasimadda Muqdisho.
Shirkii Madasha Wadatashiga Qaran ayaa waxaa laga soo saaray war murtiyeed(Daawo Sawirada)
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Britain Philip Hammond oo Muqdisho wada hadalo kula yeeshay Madaxweyne Xasan Sheekh, (Daawo Sawirada)